Kamisori ညှပ် | Kamisori ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွက်ကတ်ကြေး - ဂျပန်ကတ်ကြေး
Kamisori ဆံပင်ညှပ်ညှပ် | Kamisori ကပျကြေး
ပင်မစာမျက်နှာ / Kamisori ဆံပင်ညှပ်ညှပ် | Kamisori ကပျကြေး / 1 ၏စာမျက်နှာ 1
Kamisori Diablo II Professional ဆံပင်ညှပ်ညှပ်
Kamisori ညှပ် $ 499.00 AUD
Kamisori Jewel III နှစ်ထပ်ဆုံလည်ဆံပင်ညှပ်ညှပ် Set
Kamisori ညှပ် $ 749.00 AUD $ 750.00 AUD
Diablo II ကို Professional Textur ညှပ်
အကြောင်းပို Read Kamisori ဆံပင်ညှပ်ညှပ် | Kamisori ကပျကြေး
အဆိုပါ Kamisori ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရှည်လျားရှိပါတယ် နိုင်ငံတကာအနိုင်ရဘို့ဂုဏ်သတင်း ဆု ဝယ်ခြင်းငှါရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများအတွက်။
ထိုကဲ့သို့သောလက်မှုအနုပညာသည်တစ်ညတည်းဖြစ်မလာပါကဆံပင်ညှပ်ကိရိယာများကိုမျိုးဆက်သစ်များအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်တီထွင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ၏မျက်စိ၌ Kamisoriအဆင့်မြင့်ဓါးဖြင့်လုပ်ခြင်းသည်အနုပညာပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကြောင်းပိုမို Read Kamisori ညှပ်မှာ ဒီမှာ Scissorhub.com.au!
Kamisori ညှပ်နှင့်ကတ်ကြေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - သူတို့ကောင်းလား။
အွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ်ခြင်းဖြင့် ၀ ယ်ယူခြင်းသည်မလွယ်ကူသော်လည်းကောင်းကျိုးများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည့်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖြစ် Kamisori Shears သည်လူကြိုက်များသောဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးတံဆိပ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီးသြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ယူအက်စ်မှပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်၎င်းတို့မည်ကဲ့သို့ခံစားရသည်၊ လုပ်ဆောင်ပုံနှင့်မည်မျှကြာသည်ကိုအသေးစိတ်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
များအတွက်အကောင်းဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Kamisori ဆံပင်ညှပ်သူများသည်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများ၏ရှုထောင့်မှလာပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက်မည်မျှကောင်းသည်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြသည်။
ဘယ်လိုလဲ Kamisori ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတံဆိပ်ဖြစ်လာသည်
Kamisori အထူးသဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်ဆံပင်ဖြတ်စက်ကိုတီထွင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီသည်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရည်အသွေးရှိပြီးသံမဏိများမှရရှိသည်။
Kamisori သူတို့၏ကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေးမြင့်သောကတ်ကြေးများထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက်ဂုဏ်ယူကြသည်။ သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့လက်မှုလက်ရာ၊ эрဂနွန်ဒီဇိုင်းများနဲ့သေစေလောက်တဲ့ချွန်ထက်သောဓါးများကသူတို့ကိုကတ်ကြေးတံဆိပ်လုပ်ငန်းအတွက်အစွမ်းကုန်အားပေးသည်။
သူတို့၏ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ protocol သည်တင်းကြပ်သည်။ စုံတွဲတစ်တွဲစီသည်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာမှုနှင့်သုတေသနမှသူတို့၏အဆင့်အတန်းကိုပါးနပ်စွာတည်ဆောက်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ညှပ်တစ်ခုချင်းစီသည်တိကျခိုင်မာသည့်လက်မှုပညာဖြင့်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ အဆင့် ၉၃ ခုသည်အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးနှင့်ကျော်ကြားစေသည့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အသုံးပြုသည်။
ထိုသို့သောလက်မှုလက်သည်တစ်ညတာတွင်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ သူတို့သည်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းဒီဇိုင်းများကိုမျိုးဆက်သစ်များအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်နေပြီဖြစ်သည်။ ၏မျက်စိ၌ Kamisori, အဆင့်မြင့်ဓါးပြုလုပ်ခြင်းသည်အနုပညာပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရည်အချင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တည်းသာအရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များကိုဖြန့်ဝေရန်နှင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများနှင့်နည်းစနစ်များကိုကျွမ်းကျင်စွာတတ်နိုင်သည်။
ပုံ - Kamasoir ၏အနက်ရောင်စိန်ပုံစံ
ယနေ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများသည်ဓားများနှင့်တိုက်ပွဲမ ၀ င်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခိုင်မာသောချွန်ထက်။ ကြာရှည်ခံနိုင်သောလက်ရာမြောက်သောသံမဏိလိုအပ်သည်။ Kamisoriကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကတော့ Damascus ညှပ်ညှာတာမှုများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဤမော်ဒယ်များကိုတစ် ဦး မှတစ် ဦး အစဉ်အဆက်အစဉ်အဆက်မှတစ်ဆက်သို့ဖြတ်သန်းသွားသောအကောင်းဆုံးလက်မှုလက်ရာတွင်အစဉ်အလာအရလေးစားရသောဂျပန်ဓါးပြတိုက်သူများမှထုတ်လုပ်သည်။ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကြားသောပလက်ဖောင်းဆံပင်အနုပညာရှင်များအသုံးပြုသည်။
တစ်ချိန်ကနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်ပြောကြားခဲ့သည့်ဤမြင့်မားသောအဆင့်မြင့်ကိရိယာများ၊ "ညှပ်ကမ္ဘာ၏ Ferraris" များမှာ!
ရုပ်ပုံ: Kamisori နဂါးစုဆောင်းမှု
ဤရွေ့ကားညှပ်ယနေ့ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးပစ္စည်းအချို့ကိုမှဂျပန်တွင်အတုနေကြသည်။ စုံတွဲတစ်တွဲစီသည်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာမှု၊ သုတေသနနှင့်စမ်းသပ်မှုများမှရလဒ်များကို အသုံးပြု၍ လိမ္မာပါးနပ်စွာတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နဂါးစုဆောင်းမှုသည်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူကိုလန်းဆန်းစတိုင်လ်မျှတပြီးတိကျမှန်ကန်သောညှပ်ညှပ်များကိုယူဆောင်။ ပြသနိုင်သည့်အပြင်ပင်ပန်းစေပါသည်။
လက်ကိုင်နှင့်စတိုင်လ်များသည်တကယ့် ဦး ခေါင်းလှည့်သူများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်သြစတြေးလျရှိဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးပုံစံများကိုရှာဖွေကြသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများသည်အရည်အသွေးမြင့်ညှပ်များကိုရှာဖွေနေပြီး Dragon Collection သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
မှ Kamisori ကိုဘာ, FeatherLite, Kaos နှင့် Havok, Dragon Series သည်သြစတြေးလျရှိဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးများကိုအကောင်းဆုံးနှင့်အလွန်ရှာဖွေမှုတွင် ဦး ဆောင်သည်။ The Kamisori3Piece Sword Master သည်စတိုးနှင့်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်တွေ့ရသောအကောင်းဆုံးဂျပန်ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုအသုံးပြုခြင်း Kamisori ခန္ဓာဗေဒစနစ်နှင့်ထူးခြားသောထောင့်ထားဓါးသွားများကြောင့်၎င်းသည်တစ်ခုသို့ ဦး တည်စေသည် Kamisoriဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာညှပ်ညှပ်။
ရုပ်ပုံ: Kamisori ညှပ်တိုက်တေနီယမ်စုဆောင်းမှု (ပရီမီယံ)
အဆိုပါ Kamisori တိုက်တေနီယမ်စုဆောင်းမှုသည်ရဲရင့်ခြင်း၊ Titide စီးရီးသည် Pride and Perseverance ကဲ့သို့လူသိများသောမော်ဒယ်များဖြင့်ကျော်ကြားလာပြီး ၁၅ နှစ်ကျော်Australiaစတြေးလျတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှကိုအထင်ကြီးလေးစားမိသည်။
တိုက်တေနီယမ်စုဆောင်းမှုသည် Damascus နှင့် Dragon Collection ကဲ့သို့သောအခြားဆံပင်အလှပြုပြင်ရေးကတ်ကြေးများထက်စျေးနှုန်းချိုသာသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူအများစုသည်၎င်းတို့ကိုအကောင်းဆုံး ၀ င်ပေါက်အဆင့်စုံတွဲအဖြစ်ကျိန်ဆိုကြသည် Kamisori။ သင်သည်သူတို့၏ထူးခြားသောဒီဇိုင်းများနှင့်စတိုင်များကိုချစ်မြတ်နိုးမည်သာမကသင်သည်ချောမွေ့စွာဖြတ်တောက်နိုင်သည့်အပြင်သင်ဖြတ်တောက်နေစဉ်သင့်အားအကာအကွယ်ပေးနိုင်သောထူးခြားသောэрဂုံနစ်နှင့်ကွေးသောလက်ကိုင်များကိုလည်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကတော့ Kamisori အနက်ရောင် Diamon နှင့် Kamisori Diablo ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး။ Uber ချွန်ထက်သောအနားများဖြင့်ရိုးရှင်း။ စတိုင်ကျသောဒီဇိုင်းများ။ ဤရွေ့ကားတစ် ဦး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်တတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာလာနှင့်သင်၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုအလွယ်တကူကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကဆံပင်ကို“ တွန်း” မထားဘူး၊
ရုပ်ပုံ: Kamisori ညှပ် Diablo မော်ဒယ်
Kamisori ညှပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ကတ်ကြေးနှိုင်းယှဉ်
အဲဒီအစား၏ဤပြေး - မှတဆင့်အဆုံးသတ်ရေးထက် Kamisori 2019. ခုနှစ်တွင်Australiaစတြေးလျရှိဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများဂျပန်ကတ်ကြေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ 2019 ၏အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးတံဆိပ်များဟုထင်မြင်သည့်အရာကိုလမ်းညွှန်သည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာတူးရန်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းညှပ်များကိုရှာဖွေရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူသို့မဟုတ်ဆံပင်ညှပ်သူအနေဖြင့်သင့်တော်သောကိရိယာများသည်သင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရုံသာမကသင် (ergonomics) ကိုကာကွယ်ပေးပြီးအမြဲတမ်းဖြတ်တောက်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုသင်သိသည်။
ကျနော်တို့မြန်နှုန်းပတ်ပတ်လည်လုပ်။ ဆန့်ကျင်အမှတ်တံဆိပ်နှိုင်းယှဉ်တာပေါ့ Kamisori။ များသောအားဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအကြားအဓိကကွာခြားချက်သို့မဟုတ်ဆိုးကျိုးများမရှိပါ။ 2019 တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကိုနေရာတိုင်းတွင်ရှိသည်။ ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်တံဆိပ် ၅ ခုအထိစာရင်းကိုကျဉ်းမြောင်းစေရန်ခက်ခဲသည်။
Are Kamisori ညှပ်စရာကောင်းပါသလား
ဆံပင်ညှပ်သမားများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများသည်စိတ်ချရသောဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးကိုရှာဖွေနေသောအခါ၊ Kamisori ညှပ် ထိပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ညှပ်တစ် ဦး အဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်။
လူတွေမေးနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးမေးခွန်းက "ပါ။ " Kamisori တစ်စုံတစ်ယောက်သည်များသောအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ထက်ပိုသောကြောင့်၎င်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတော်အတန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်သေချာစေချင်သည်။
အနည်းငယ်သောအရာ Kamisori ကောင်းသောဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးကိုဖန်တီးသည့်အခါညှပ်သည်ကောင်းသည်။
offset ergonomic လက်ကိုင်
သင်ယူရန်သို့မဟုတ်မ Kamisori Shears သည်ကောင်းသောကတ်ကြေးများဖန်တီးပေးသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ကုမ္ပဏီသတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုခဲ့သည်။
၎င်းတို့ကိုကနေဒါမှအခြေစိုက်ပြီးအမေရိက (အမေရိကန်) သို့အဓိကရောင်းချသည်။ ၎င်းကို ၁၀၀% အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၎င်းသည်တောင်ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်၎င်းတို့၏ကတ်ကြေးများကိုပြုလုပ်သည်ဟုထင်ရသည်။
ဖြစ်စေမမေးသောအခါ Kamisori Shears ကကောင်းတယ်၊ ငါတို့သူတို့ရဲ့ရှည်လျားတဲ့ဆုစာရင်းကိုစစ်ဆေးရတယ်။
ဂူဂဲလ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ Instagram နှင့်အခြားအရာများမှတစ်ဆင့်၎င်းတို့သည်နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော်သုံးစွဲရန်ခန့်မှန်းထားသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သည်ဆံပင်ကတ်အသစ်တစ်စုံကိုရှာဖွေသောအခါလူအများစုသည်လုံခြုံစိတ်ချရသော၊ လူသိများသောနာမည်ကောင်းတံဆိပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြသည်။ Kamisori Shears သည်လူသိများသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအား Kamisori Shears သည်ကြယ် ၅ လုံး၊ တံဆိပ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်မြင်သည့်အရာကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၊ ခုန်။ ဝယ်ယူပါ။ သူတို့သည်ကနေဒါမှကမ္ဘာအနှံ့ရှိယုံကြည်စိတ်ချရပြီးအရည်အသွေးကောင်းသောဆံပင်ညှပ်များကိုတင်ပို့သည်။